Odisha Spritual Tour | Enda kunzvimbo dzakanaka dzeHudisha
Odisha inyika yekunakidza mune zvekunamata, uye ndeipi nzira iri nani yekutarisana nayo kupfuura yehutori hwehudhihuhu. Nzvimbo dzeSepfigu dzakagara dzichinyanya kukoshesa pamusoro pekukosha kukuru kwekuremekedza kwekunamata kwehutori hweAdisha. Zvinyorwa zvechimiro zveHurumende zvinoratidzirwa muzvikwata zvinoshamisa zvakasangana nekambani. Zvinyorwa izvi zvakajeka zvekunzwisisa kwekunaka kwemweya kweAdisha. 'Odisha Tour neTemberi' zvechokwadi ndiyo nguva yehupenyu inopiwa neSandra Pebbles. Iyo 'Bhubaneswar Special Tour' inotarisa vatashanyi kumaparera ekunakisisa mune zvemweya anowedzera muGuta reMutaundi. Saizvozvowo kune imwe nzira inofadza yekufambisa mune zvekunamata inoputira Puri, Konark, Chilika, Bhitarkanika, uye Similipal. Puri-Mangalajodi-Gopalpur-Chandragiri purogiramu uye Bhubaneswar - Puri - Barkul - Gopalpur - purogiramu inosimudzira mweya wevashanyi. Nzvimbo dzakagadzikana dzekushanyirwa kweKolkata - Gangasagar - Sundarbans dzakasungirirwa nekunatswa kwekugadzira rwendo rwunoshamisa rwomweya rweIndia.
Dombo reMatombo rinoita zvose zvaunokwanisa nekunyatsoziva kuti vatashanyi vanowana mikana yakawanda yekuzarura mukati mavo voga uye kuwana ruzivo rwekuvhara maziso neurwendo rwedu rwomudzimu. Sandhu Makungu anotsvaga pasina dombo rakasunungurwa kuti ripe vatashanyi kuti ethereal inofadza kuitakudza kuburikidza nekunzikanwa kwevatariri vatsvene kunzvimbo dzeHowing Odisha
Odisha Kurwisa neMatemberi